बागलुङ नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक: पूर्वाधार विकासमा बिशेष जोड ! – ebaglung.com
बागलुङ नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक: पूर्वाधार विकासमा बिशेष जोड !
२०७६ असार ८, आईतवार १८:०३	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७६ असार ८ । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । पांचौ नगर सभामा नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले आईतबार निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नगरसभाको उद्घाटन गर्दै पौडेलले नगरपालिकाको पुर्बाधार बिकास र सम्मृद्धिका लागि बिशेष जोड दिईएको बताए ।
नगर प्रमुख पौडेलले प्रस्तुत गरेको निती तथा कार्यक्रम अन्र्तगत पुर्बाधार तथा सहरी बिकास आर्थिक तथा सामाजिक बिकास, वातावरण खेलकुद शिक्षा शासकीय व्यवस्था सुधार खानेपानी कला संस्कृति सुचना संचार जलबिद्युत उर्जा कानुन र न्याय लगायतलाई जोड दिएको छ । जसअन्र्तगत बागलुङ्ग बजार देखी हरेक वडामा बर्षेनी यातायातका साधन संचालन गर्न सहज बनाईने बा.न.पा को भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईने साविकको समिक्षालय रोडमा बहुउदेश्यीय सभाहल निर्माण आफ्नै भवन नभएका स्थानमा वडा कार्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया आगाडी बढाईने चिप्लेटी बसपार्क सुधार व्यवस्थापन पुष्पलाल लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरलाई कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सहजिकरण गरिने, हरेक वडामा नगर बस संचालनको ब्यवस्था गनर्,े सडक स्तरोन्नती बाङ्गेचौर पाङ जोड्ने झोलुङ्गेपुल समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पहल गरिने, उपल्लाचौर – नाग्लीबाङ्ग कुंडुले भेलचौर रत्नेचौर जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य यसै बर्ष शुरु गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मालढुङ्गा देखी उपल्लाचौर रत्नेचौर बेनी सडक फराकिलो बनाउन पहल गरिने बागलुङ्ग बजारका सडक चोक सुधार निर्माणको कामलाई तिव्रता दिईने अदालत चौपारी तित्याङ्ग सालबोट–भकुण्डे रायडांडा जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिईने दाबगरामा आधुनिक बसपार्क आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरिने र नगरपालिका भित्र शहरी मापदण्डलाई कडाईका साथ लागु जनता आवास कार्यक्रम नगरका सबै वडामा पुर्याउने बागलुङ्ग बजारमा ब्यवस्थीत पार्किङ्ग निर्माणको काम लाई तिब्रता, सिटीहल निर्माणका लागि जग्गा ब्यवस्थापनको लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक विकास अन्र्तगत बा.न.पा ११ रायडांडालाई बिशेष क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिने, बा.न.पा मा कृषि क्याम्पस संचालन गरिने कृषि पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याईने बा.न.पा ३ गुठीमा हाट बजार संचालनमा ल्याईने, गरिबी संग मियर मेयर ऋषिराम कार्यक्रम अन्र्तगत बिपन्न समुदायको आय आर्जनका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराईने कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम लाई प्रोत्साहन गरिने अति बिपन्नको पहिचान गरि रोजगारी सृजना गरिने बताइएको छ ।
स्वर्गिय हरी खड्का ट्रमा सेन्टरका लागि पहल गरिने ज्येष्ठ नागरिकका लागि नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था गरिने असहाय तथा दीर्घरोगीको स्वास्थ्य सेवामा पहुचको व्यवस्था जग्गाको चक्लाबन्दी पैयुंपाटमा नगरस्तरिय अस्पताल र पैयुंपाटामा १५ सैयाको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाईने , आर्युबेद चिकित्सा पद्धतीलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य चौकीमा आर्युबेद ओपिडि स्थापना लागु औषध सुर्तिजन्य मदिराजन्य पदार्थको प्रयोगका बिरुद्ध अभियान संचालन लगायत रहेका छन् ।
फोहोर ब्यवस्थापनका लागि साझेदारी कार्यक्रम, नगरका पुर्ण सरसफार्य १सय घरलाई पुरस्कृत गरिने वातावरण संरक्षणका लागि चौतारी पोखरीको संरक्षण पर्वद्धनको व्यवस्था,खेलकुद अन्र्तगत बाङ्गेचौर खेल मैदानलाई रंङ्गशाला निर्माण गरिने ख्याती प्राप्त खेलाडीलाई सम्मान गरिने राष्ट्रिय स्तरको मियर कप प्रतियोगिता बहुउदेश्यीय कभर्ड हल निर्माण गरिने नगर प्रमुख पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी पर्यटन अन्र्तगत बि.सं २०७७ लाई बागलुङ्ग भ्रमण बर्ष बागलुङ्ग पर्यटन बर्ष मनाउने गरी आवश्यक प्रचार प्रसारको व्यवस्था , बलेवा भैरवस्थान भकुण्डे पञ्चकोट पदमार्ग निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिईने, बागलुङ्ग कालिका पञ्चकोट, पाग्जाकोट मनकामना मालिका भैरवस्थान भुकण्डे वोडेचौर शालिग्राम संग्राहलय गौरीधाम निर्णय घाट लगायतका पर्यटकीय स्थलको बिकास बलेवा बिमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे नगर क्षेत्रका होमस्टेको प्रबद्धन बौद्ध गुम्बाको संरक्षण गरिने बताईएको छ ।
त्यस्तै नगरका हरेक वडामा एक घर एक घारा कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिईने बजार क्षेत्रको खानेपानि समस्यालाई समाधान गर्न काठेखोलको पानिलाई लिफ्टीङ्ग प्रणालिमा आधारित केन्द्रीय योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिने, बजार क्षेत्र रात्माटा पाखाथर तिनतले समेतलाई समेतलाई समेट्ने गरी काठेखोला र रमेटार, कुडुले ओढारचौर समेट्ने गरी कालीगण्डकीबाट लिफ्टीङ्ग प्रविधीको खानेपानि आयोजना लहरेपिपल लामाचौर लगायतका क्षेत्रका दीर्घकालीन खानेपानी समस्याको समाधानको लागि काम लगाडी बढाईने निती तथा कार्यक्रममा लगायत उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बागलुङ गरपालिकाको पाँचौ नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम
सभाध्यक्ष एवं सभासदज्यूहरु,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप स्थानीय सरकार निर्माण भई दुई वर्ष व्यतित भएको छ । पाँचौ नगर सभाको यस सभामा तेस्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप स्थानीय सरकार निर्माण भै दुई वर्ष व्यतित भएको छ । पाँचौ नगर सभाको यस सभामा तेस्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।
सामन्ती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अन्त्यको क्रम, जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायत संघर्षहरुमा शाहदत प्राप्त गर्ने अमर शहिद, बेपत्ता घाइते परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । पूर्व नगरप्रमुख ऋषिराम शर्माप्रति हार्दिक सम्मान र श्रद्धा प्रकट गर्दछु ।
संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीद्धारा लोकतान्त्रिक समाजवादको स्थापनाको लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न यस नगर सरकार प्रतिबद्ध रहँदै नगरको समग्र विकास र आम नगरवासीको हक हित र अधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेका एकल अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ । साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार र जिम्मेवारीलाई समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, एकल अधिकार एवं साझा अधिकार साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्र लगायतमा राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आधार मानी यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने यस अवसरमा २ वर्षमा भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।
–	आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार हो । सडक, खानेपानी, विद्युतको भरपर्दो व्यवस्थाले अर्थिक विकासलाई तीव्रढगले अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । हामीेले पूर्वाधारको विकासलाई महत्वका साथ प्राथमिकता दिएका छौं । साथै नगरको समग्र विकाशका लागि निम्नानुसार उपलब्धी हासिल भएको छ ।
–	स्थानीयले निःशुल्क जग्गा दिदा समेत लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको बागलुङ बसपार्क जनप्रतिनिधि आएसँगै निर्माणको कामले गति लिएको छ ।
–	बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ३ मा स्थित चिप्लेटी बसपार्कको स्वामित्व बागलुङ नगरपालिकामा ल्याइएको छ ।
–	बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ बाङ्गेचौर–कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १ पाङ अदुवावारी जोड्ने सम्भवत एसियाकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल, मालिका– बेनी न.पा. २ खेतार झोलुङ्गेपुल तीव्र गतिका साथ निर्माण भइरहेको छ । उपल्लाचौर–नाग्लीवाङ र भेलचौर–रत्नेचौर झोलुङ्गेपुल स्वीकृतपछि निर्माणको चरणमा छ ।
–	तिरुपतीचोक–मालिका–पञ्चकोट–माझकोट–तितौरे हुँदै धम्जा जाने सडकको १४ कि.मी. सडक कालोपत्रे निर्माण कार्य आगामी वर्षदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ ।
–	पाग्जा–पानीट्याङ्की–सरंगी–कुश्मीसेरा सडक खण्डको १० किमी स्वीकृत भई यसै वर्षदेखि काम सुरु भएको छ ।
–	नगरका सबै महत्वपूर्ण सडक चौडा फराकिलो बनाउने कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ ।
–	विश्व बैंकको सहकार्यमा अदालत चौपारी तित्याङ भकुण्डे रायडाडा खण्डको २५ कि.मी.सडक कालोपत्रे योजना स्वीकृत भएको छ ।
–	नगरका वडा केन्द्रसम्म बाह्रै महिना बस सेवा संचालन गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार भकुण्डे, रायडाँडा, पैँयुपाटा, अमलाचौर बस सेवा सञ्चालन भएको छ ।
–	नगरका वडा केन्द्रविन्दु पुग्ने प्रमुख सडक कालोपत्रे गर्ने उद्देश्य अनुसार वडा नं. ५–७ र १३–१४ पु¥याउन कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
–	सडक निर्माणलाई दीर्घकालिन बनाउँनका लागि बागलुङ नगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा नगर क्षेत्र भित्र कालोपत्रे तथा ढलान ४.८३ किलोमिटर, पक्की नाली २.९४ किलोमिटर, सडक स्तरोन्नती ८५.१२ किलोमिटर सडक र पैदल मार्ग ९.९६ किलोमिटर निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ ।
–	बागलुङ बजारका शिवधारा चोक, कम्पुटोल, हल्लनचोक को सुधार गरिएको छ ।
–	बागलुङ बजारको ढल निकासका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा डिपिआर भई यसै आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ ।
–	बागलुङ नगर क्षेत्रमा सडक मर्मत सम्भारका लागि आफ्नै डोजर खरिद गरी अत्यावश्यक मर्मत सम्भारका कामहरु आफ्नै श्रोत र साधनबाट थालनी गरिएको छ ।
–	बागलुङको नगर क्षेत्रमा जिर्ण अवस्थामा रहेका काठे पोल विस्थापित गरी ९०० वटा नयाँ फलामे पोलबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । यस्तै बागलुङ बजार क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा नाङ्गा तारहरु हटाई ६५ किलोमिटर इन्सुलेसन तारको प्रयोग गरिएको छ ।
–	नेपाल टेलिकममार्फत बागलुङ बजार क्षेत्रमा पुरानो कपर तार विस्थापित गरी हाइ स्पिडको इन्टरनेट प्राप्त गर्ने अप्टिकल फाइवर तार विच्छाउँने कार्य सुरु गरिएको छ ।
–	नगरको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बलेवा–भैरवस्थान–भकुण्डे–पञ्चकोट पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । त्यस्तै शालिग्राम संग्राहलयदेखि पञ्चकोटसम्मको पदमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
–	बलेवा एयरपोर्ट कालोपत्रे गर्न संघीय सरकारबाट ४ करोड रुपियाँ बजेट स्वीकृत भई यसै वर्षदेखि काम सुभारम्भ हुँदैछ ।
–	बा.न.पा. १३, कालाखोलामा रहेको ८५ रोपनी जग्गामा उद्योग ग्राम निर्माणका लागि नगरले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट छनोट गरी कार्य सुभारम्भ हुनेछ ।
–	बागलुङ नगरवासीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन कुँडुले, लहेरपिपल, कालिमाटी, सिगाना, तित्याङ, भकुण्डे पैँयुपाटा अमलाचौर लगायतका क्षेत्रमा ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमअन्र्तगत एक हजार ८४ घरमा नयाँ धारा जडान गरिएको छ । यो अवधीमा दुई वटा ठूला ट्याङ्की, इन्टेक २६ वटा, पानी संकलन ट्याङ्की २२, धारा वितरण गर्ने बक्स ८७, वितरण पाइपलाइन २९.१६ किमी र मुख्य पाइप लाइन १५ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।
–	नगरमा खानेपानीको समस्यालाई दिर्घकालिन ढंगले समाधान गर्न बागलुङ बजार क्षेत्र, रात्माटा, पाखाथर, तिनतले समेतलाई समेट्नेगरी काठेखोला र रमेटार, कुडुले, ओडारचौरलाई समेट्नेगरी कालिगण्डकीबाट लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजना र लहरेपिपल, लामाचौर, रोकापाला लगायतका क्षत्रमा दीर्घकालिन खानेपानी समस्याको समाधानको काम अगाडि बढाइएको छ ।
–	बा.न.पा. ३, ७ र ९ का करिब २००० घरलाई एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्र्तगत योजना स्वीकृत भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
–	कृषकहरुलाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउँनका लागि १०९८ मिटर सिंचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ ।
–	करिब २६ वर्ष अगाडि बागलुङ बजारमा सडक निर्माणका क्रममा घरवास गुमाइ बाङ्गेचौर खेल मैदानमा बस्दै आएका माझी समुदायलाई एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गरी आफ्नै घरमा बस्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।
–	एकीकृत शहरी विकास योजना लागु भएको छ ।
–	नगरको चालु आर्थिक वर्षमा ७७ वटा भवन निर्माण तथा मर्मत, ४ वटा शौचालय निर्माण, पञ्चकोट, रंगबैकटेश्वर, शालिग्राम संग्राहलय, भैरवस्थान, मनकामना मन्दिर, रानेभुमे लगायतका २६ वटा भवन निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
–	सडक मापदण्ड र भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अहिलेसम्म भुकम्पबाट क्षती भएका ६२७ लाभग्राही मध्य ५३६ जनाले प्रथम किस्ता, २७० जनाले दोस्रो र २२८ ले तेस्रो किस्ता रकम लिई घर निर्माण गरेका छन् ।
–	जनप्रतिनिधिलाई भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर र मापदण्ड सम्बन्धी तालिम दिइएको छ ।
–	जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व नक्सापास प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण गरिएको संरचनाहरुको अभिलेख र आवश्यक कार्यविधि तयार गरी त्यसको नियमितताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
–	नक्सा स्वीकृतीका लागि कन्सल्ट्यान्ट सूचीकृत, भवन निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीको अभिलेख तयार गरिएको छ ।
–	मालिका क्षेत्रमा (न्भययिनष्अब िएबचप) निर्माणको सभव्यता अध्ययन भएको छ । अन्य ७ ठाउँमा पार्क पोखरी निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ ।
–	बागलुङ बजारको रुद्रेपिपल, तित्याङ (झोलुङ्गे पुल पारी) रहेका पुराना परम्परागत चौतारीको संरक्षण गरी हरियाली पार्कको रुपमा विकास गर्ने कामको प्रारम्भ गरिएको छ ।
–	बागलुङ कालिका मन्दिर, पञ्चकोट, मालिका, भकुण्डे, वौडेचौर, भैरवस्थान, शालिग्राम संग्रहालय, गौरीधाम, निरयघाट जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको बृहत्तर विकासका लागि काम भइरहेको छ ।
–	नगरका विभिन्न स्थानमा ५३२ मिटर पर्खाल निर्माण, २३१ मिटर पहिरो तथा भूक्षय संरक्षण गरिएको छ ।
–	बागलुङ नगरपालिकाअन्र्तगत पशु स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोगशाला को संरचना निर्माण गरिएको छ ।
–	नगर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाको सहकार्यमा ‘एकतर्फी पार्किङ’को प्रावधान अनुसार व्यवस्थित पार्किङको कार्य आरम्भ गरिएको छ ।
–	बागलुङ नगरपालिकाद्वारा कृषि प्राविधिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ ।
–	बागलुङ नगरपालिकामा आधुनिक सित भण्डार र बा.न.पा. १२ मा कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
–	बागलुङ नगर क्षेत्रका सिगाना, तित्याङ, भकुण्डेका माथिल्लो भूभागमा व्यवसायिक चिया खेती विस्तारका लागि विरुवा वितरण र कृषकहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
–	कृषि उत्पादनलाई सहजै उपभोक्ता समक्ष पु¥याउन सकियोस भन्ने उद्देश्यले बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ३ मा कृषि तरकारी संकलन तथा बिक्री केन्द्र (हाट बजार) निर्माण कार्य भै रहेको छ ।
–	‘गरिवीसँग मेयर ऋषिराम’ कार्यक्रमअन्र्तगत नगरका विपन्न समुदायलाई आयआर्जनका लागि ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुभारम्भ गरिएको छ ।
–	खरका छानो हटाई टिनको छानोमा ल्याउने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
–	बागलुङ नगरपालिकाअन्र्तगत अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी केन्द्रमा दर्ता भएका २९ उजुरीकर्तालाई सेवा प्रवाह भएको छ । यस्तै मानव सेवा आश्रमको अभिभावकत्व लिई त्यसको भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ ।
–	महिला जागरणका लागि महिला समिति गठन तथा अनुशिक्षण, संस्थागत नेतृत्व तालिम जस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।
–	बालबालिकाको बृहत्तर हितका लागि बाल क्लब गठन, बालबालिका माथी हुने शारिरिक, मानसिक दुव्र्यवहार न्यूनिकरण कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।
–	नगरपालिकाको आयोजनामा अपाङ्गता दिवस, अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला, जेष्ठ नागरिक दिवस, जेष्ठ नागरिक दुव्र्यवहार विरुद्धको दिवस, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान जस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।
–	फोहोर मैलाबाट वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाताको छनोट गरी कार्य आरम्भ गरिएको छ ।
–	बजार क्षेत्रको २.५७ किमी नाली तथा ढल नियमित सरसफाई गरी ढल निकासको काम गरिएको छ ।
–	बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ बाङ्गेचौरको खेल मैदानलाई रङ्गशाला निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट योजना स्वीकृत गराई काम आरम्भ हुँदैछ ।
–	बागलुङ नगरका भकुण्डे, ओडारचौर, आलेखर्क, बौडैचौर, नाराणस्थान (नेपाने) लगायत ४४ स्थानका खेलकुद मैदान निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ ।
–	बागलुङ बजारमा व्यवस्थित क्रिकेट तालिम मैदानका लागि बागलुङ नगरपालिकाकै आर्थिक लगानीमा क्रिकेट तालिम केन्द्र निर्माणको काम भएको छ ।
–	सामुदायिक विद्यालयका पूर्वाधार निर्माणका लागि महाविद्याजन, तित्याङ, मुलपानी, रुद्रेपिपल, मालिका, कुडुले, विद्यामन्दिर, विश्वकर्मा, बाटुले, तितौर, गणेश, जनमत लगायतका विद्यालयमा २ कोठे तथा ४ कोठे भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।
–	नगरका विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने अभियानअन्र्तगत लहरेपिपल माध्यामिक विद्यालय लाई बस सेवा प्रदान गर्न सहयोग गरिएको छ ।
–	सामुदायिक विद्यालयहरुमा आइसिटी, पुस्तकालय, शौचालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ ।
–	सबै माध्यामिक विद्यालयहरुमा अनलाइन सफ्टवयर प्रणालीबाट तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।
–	विभिन्न वडामा रहेका बालविकास केन्द्रको सुदृढिकरण गरिएको छ ।
–	माध्यामिक विद्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ ।
–	शिक्षक नियुक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शी रुपमा यस अवधीमा करीब १०० जना शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ ।
–	सामुदायिक विद्यायलाई व्यवसायिक धारमा प्रवद्र्धन गर्न पशु तथा कृषि भेटेनरी शिक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
–	नगरका कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म दिवा कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
–	धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विशेषज्ञ सेवा सहित जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम भएको छ ।
–	बागलुङ नगरपालिकालाई पूर्ण खोप युक्त घोषणा गरिएको छ ।
–	विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा, उपचार खर्च प्रदान गरिदै आएको छ ।
–	जोखिमपूर्ण श्रमिकहरुका लागि विमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
–	घना बस्ती तथा स्वास्थ्यचौकी पुग्नका लागि लामो समय लाग्ने वडा नं. १२ तल्लो सरंगी र १३ को बाँस्कोटमा सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरी नगरपालिकाको आफ्नै व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
–	नगरका सिगाना, तित्याङ, रायडाँडा र अमलाचौरमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्यचौकी निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण सम्पन्न नभएका स्वास्थ्यचौकीलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पहल गरिनेछ ।
–	सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा अनलाइनमार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको ।
–	राजश्व संकलन गर्ने कामका लागि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुभारम्भ गरिएको छ । बजार तथा ग्रामिण क्षेत्रमा राजश्व संकलन गर्न टोली खटाई आवश्यक अनुगमन गरिएको छ ।
–	राजश्व संकलनतर्फ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा १,३७,९०,५४१।– आ.व. २०७४÷०७५ मा २,५२,६९,२२९।– र चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २,६६,००,०००।– रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको ।
–	न्यायिक सेवालाई नगरबाट सहज रुपमा प्रदान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक इजलास स्थापना गरी नियमित इजलास, मेलमिलाप तथा फैसला गरी नगरवासीलाई न्यायिक सुविधा प्रदान गरिदै आएको छ । हालसम्म न्यायीक समितिमा दर्ता भएका २८ वटा मुद्वा मध्य २० वटा मुद्धा फछ्र्याट भएका छन् ।
–	नगरपालिकाको अहिलेसम्मको अवधीमा ४ वटा नगरसभा, ४२ वटा कार्यपालिका बैठक सम्पन्न गरी उक्त सभा तथा बैठकबाट ऐन ११, नियमावली २, कार्यविधि १४, निर्देशिका २ वटा निर्माण गरिएको छ ।
–	नगरवासीलाई सेवा प्राप्तीमा सहज होस भन्ने उद्देश्यले बागलुङ बजारबाटै सेवा प्रदान गर्नेगरी कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
–	नगर भित्रका शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, महिला विकास शाखा, सहकारी, राजश्व लगायतका शाखाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिएको छ ।
–	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि कार्यालय स्थापना गरी यसै वर्षदेखि कार्यआरम्भ गरिनेछ ।
–	समाज सुधारक भगत सर्वजित विश्वकर्माको स्मृतिमा संग्रहालय निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ ।
अव म बागलुङ नगरपालिकाको यस सम्मनित पाँचौ नगरसभा समक्ष आ.व. २०७६÷०७७ का नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।
१) पूर्वाधार तथा शहरी विकास
–	बागलुङ नगरको केन्द्र बागलुङ बजारदेखि हरेक वडा कार्यालयमा बाह्रै महिना यातायातका साधनहरु सञ्चालन गर्न सहज बनाइनेछ ।
–	बागलुङ नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
–	साविकको समीक्षालयरोडमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
–	आफ्नै भवन नभएका वडाहरुमा वडा कार्यालय निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
–	बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ३ मा स्थीत चिप्लेटी बसपार्क सुधार र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
–	बागलुङका दुई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुष्पलाल लोकमार्ग र कालिगण्डकी करिडोर लाई कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
–	नगरपालिकाले स्थापित गरेका नगरस्तरीय समृद्ध र गौरवका सडक आयोजनाको स्तरउन्नतीलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	हरेक वडामा नगर वस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
–	बजार क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनका लागि डिपिआर स्वीकृत भैसकेकाले बृहत ढल निकास आयोजना निर्माणको कार्य सुभारम्भ गरिनेछ ।
–	बा.न.पा. १३ नयाँपुलमा औद्योगिक ग्रामको स्वीकृत भैसकेकाले निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।
–	हरेक गाउँ बस्ती तथा टोलसम्म पुग्नेगरी निर्माण गरिएको सडकहरुको स्तरोन्नती गरी स्थायी संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ ।
–	शहरी र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारका लागि समपुरक (एकमुष्ठ) कोष खडा गरिनेछ ।
–	दुई वा दुई भन्दा बढी वडावासी प्रभावित हुने योजनालाई एकमुष्ठ नगर स्तरीय योजनामा सामेल गरिनेछ ।
–	शहरी सौन्दर्यका लागि घरघरमा गमला राख्ने, पोल पेन्टिङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	बाङ्गेचौर–पाङ जोड्ने झोलुङ्गे पुल समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पहल गरिनेछ । उपल्लाचौर–नाग्लीवाङ र कुँडुले भेलचौर–रत्नेचौर जोड्ने अग्लो झोलुङ्गेपुल निर्माण यसै वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ ।
–	पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर मापनका लागि आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोग गरी गुणस्तरमा आधारित मूल्याङ्कन पद्दती कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–	बागलुङ जिल्ला प्रवेशद्वारा मालढुङ्गादेखि उपल्लाचौर–रत्नेचौर–बेनी सडक फराकिलो बनाउँन पहल गरिनेछ ।
–	कालिगण्डकी करिडोरको रेखाङ्कन हुँन बाँकी मालढुङ्गा–बेनी खण्डलाई बागलुङ खण्डहुदै लैजानका लागि पहल गरिनेछ ।
–	बागलुङ बजारका सडक, चोक सुधार निर्माणको कामलाई तिव्रता दिइनेछ ।
–	विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन थालेको अदालतचौपारी–तित्या सालबोट–भकुण्डे–रायडाँडा जोड्ने २५ किमी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिन पहल गरिनेछ ।
–	दावगरामा निर्माणाधिन आधुनिक बसपार्क आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
–	शहरी मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गर्दै मापदण्ड विपरित बनेका संरचनाहरुलाई कानून बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
–	नगर क्षेत्रमा सडक मापदण्ड निर्धारण नभएका ठाउँको मापदण्ड निर्धारण र व्यवहारिक नदेखिएका निर्धारित ठाउँको मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।
–	अब बन्ने संरचना अनिवार्य रुपमा भुकम्प प्रतिरोधी बनाउँनका लागि हरेक वडामा दक्ष डकर्मी उत्पादन तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	शहरी विकासका लागि बलेवाका नाराणस्थान तथा पैयुपाटालाई विस्तार कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्यन गरिनेछ ।
–	नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका जनता आवास कार्यक्रम नगरका सबै वडाहरुमा पु¥याउँने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
–	बजारमा बढ्दो पार्किङ समस्यालाई समाधान गर्नका लागि व्यवस्थित पार्किङ निर्माणको कामलाई तिव्रता दिइनेछ ।
–	जग्गा अभावका कारण रोकिएको बागलुङ सिटी हल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनकालागि पहल गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ ।
–	सार्वजनिक शौचालयलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
२) आर्थिक विकास
–	भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रको रुपमा रहेको वडा नं. ११, रायडाँडालाई विशेष क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
–	बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
–	कर्मचारी समायोजनका कारण बन्द अवस्थामा रहेका कृषि, पशु सेवा केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
–	बागलुङ नगरपालिका वडा नं. २ र बा.न.पा. १२ मा कृषि उपज संकलन तथा आधुनिक सित भण्डार निर्माण गरिनेछ ।
–	कृषि उपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँन सुन्तला, कागती, चिया, किवी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ ।
–	बागलुङ नगरका वडाहरुमा एक वडा तीन उत्पादन नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
–	बागलुङ नगरलाई घाँसको विउमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
–	कृषि उत्पादनलाई सहजै उपभोक्ता समक्ष पु¥याउन बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ३ गुठीमा कृषि तरकारी संकलन तथा बिक्री केन्द्र (हाट बजार) सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
–	‘गरिवीसँग मेयर ऋषिराम’ कार्यक्रमअन्र्तगत नगरका विपन्न समुदायलाई आय आर्जनक लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउँने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	गरिब विपनका खरका छानो हटाई टिनको छानोमा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	व्यवसायीक कृषि तथा पशु विकास अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ९ तित्याङ र ११ रायडाँडामा रहेका खानी सञ्चालनका लागि विज्ञहरुको सुझावको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
–	नगर तथा वडा स्तरीय कृषि सञ्जाल गठन गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्रमा जडिबुटी खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन एवं प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–	कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–	सिकर्मीका लागि रुख कटान तथा किसानहरुलाई मेसिन अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।
–	प्रत्यक वडा तीन उत्पादन नीति अवलम्बन गरी उत्पादनलाई जोड दिइनेछ ।
–	हरेकमा अति विपन्न परिवार पहिचान गरी उनीहरुलाई रोजगारी सिर्जना गरी आयस्तर बृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्रका परम्परागत आरन सुधार गरी व्यवसायिक बनाउँन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३) सामाजिक विकास
–	धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा स्वर्गीय सभासद हरि खड्काको स्मृतिमा ‘हरि खड्का ट्रमा सेन्टर’ निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।
–	वडाका टोल टोलमा स्वास्थ्यकर्मी पुगेर जेष्ठ नागरिकहरुका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
–	नसर्ने रोगहरुका विरुद्ध जागरण तथा हरेक वार्डमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
–	असहाय तथा दिर्घरोगीहरुको उपचारमा पहुंचयोग्य वनाउन जोड दिईएको छ ।
–	अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य बिमाका सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्यचौकीबाट प्राप्त हुनेगरी स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउँन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
–	बागलुङ नगर क्षेत्रका विज्ञहरुको सूची तयार गरी प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि लगत तयार गरी प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।
–	जग्गाको चाक्लाबन्दीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
–	छुवाछुत मुक्त दिवसलाई भगत सर्वजित विश्वकर्माको सम्झना तथा अन्य महत्वपूर्ण दिवसलाई विशेष दिवसको रुपमा मनाइनेछ ।
–	धौलागिरि अञ्चल अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँन आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।
–	धौलागिरी अंचल अस्पतालमा साविक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट संचाललित संस्थागत स्वास्थ्य क्लिनिक नगरपालिकाबाट संचालन गर्नेगरी सेवालाई निरन्तरता दिईनेछ ।
–	नगरले पूर्ण प्रसुती सेवा प्रदान गर्नेछ ।
–	आगामी वर्षदेखि नगरमा बृहत विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
–	एचआइभी एड्सबाट संक्रमितका लागि विशेष कार्यक्रम बनाइनेछ ।
–	विपन्न तथा मुस्लिम समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कामलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	नगरेको पैयुपाटामा नगर स्तरीय अस्पताल र नारायणस्थान, अमलाचौरमा १५ सैयाको अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
–	नगरमा स्वास्थ्य आमा बच्चा प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
–	हरेक स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधी तथा उपकरण अभाव हुन नदिनका लागि औषधी आपूर्तिका लागि व्यवस्था मिलाइनेछ ।
–	विपन्न औषधी उपचार सिफारिसलाई छिटो छरितो तरिकाले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
–	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सुदृढिकरण अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	स्वास्थ्यचौकी नभएका वडामा स्वास्थ्यचौकी स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ ।
–	नगरका सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा अनलाइनमार्फत तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	मृगौलाको डायलासिस सेवालाई सुचारु गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
–	पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई कृषि र पशुसेवा क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ ।
–	आर्युवेद चिकित्सा पद्धतीलाई थप प्रभावकारी बनाउँन स्वास्थ्य चौकीहरुमा आयुर्वेद ओपिडी स्थापना तथा योग शिविरहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
–	नगरस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण टोली गठन गरी परिचालन गरिनेछ ।
–	लागू औषध, सूर्तीजन्य, मदिराजन्य पदार्थको प्रयोगका विरुद्ध नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा अभियानहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
–	एलोपेथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीलाई एउटै छानामुनीबाट सेवा उपलब्ध गराउँन एकीकृत कार्ययोजना बनाउन पहल गरिनेछ ।
–	एकिकृत चिकित्सा सेवालाई प्रभावकारी ढंगले लागु गरिनेछ ।
–	फोहोरमैलाबाट वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पहल गरिनेछ ।
–	नगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि साझेदारी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	नगरका पूर्ण सरसफाई १०० घरलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
–	मालिका क्षेत्रमा (न्भययिनष्अब िएबचप) वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र, बा.न.पा. वडा नंं १ मा रहेको शहिद स्मृति पार्क र उद्यानको पुन निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	सामुदायिक वनको व्यवस्थापनलाई जीवन उपयोगी र व्यवसायिक रुपमा विकास गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
–	वातावरण संरक्षणका लागि परम्परागत पोखरी र चौपारीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्रका टोल विकास संस्थामार्फत वातावरणीय जनचेतना अभिबृद्धि गर्नेखालका कार्यक्रमहरु सञ्चानमा ल्याइनेछ ।
–	नयाँ निर्माण गरिने सडकको कार्यक्रमसँगै रोड साईड प्लान्टेशन र वायो इन्जिनियरिङलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाइनेछ ।
–	बजार क्षेत्रको नालीहरुको नियमित सरसफाई तथा मर्मतलाई विशेष ध्यान दिइनेछ ।
–	बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा रहेका रुखहरु हटाई बस्ती व्यवस्थापन तथा उत्पादन बढाउँने कार्य सुरु गरिनेछ ।
–	बागलुङ बजारको उपयुक्त क्षेत्रलाई ‘नो भेइकल जोन’ को रुपमा विकास गरिनेछ ।
–	बागलुङ नगर खेलकुद विकास समिति र वडा खेलकुद विकास समिति गठन गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
–	राष्ट्रिय स्तरको मेयर कप प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ ।
–	बागलुङ नगरपालिका महत्वपूर्ण बाङ्गेचौर खेल मैदानलाई रङ्गशाला निर्माण गरी अन्य ठाउँका खेल मैदानहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ ।
–	बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
–	युवाहरुको ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धन गर्दै सकरात्मक परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–	राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त खेलाडीहरुलाई सम्मान तथा प्रोत्साहनको कार्य गरिनेछ ।
–	वि.सं. २०७७ लाई ‘बागलुङ भ्रमण वर्ष’ बागलुङ पर्यटन वर्ष मनाउँने गरी आवश्यक प्रचार प्रसारको प्रबन्ध गरिनेछ ।
–	नगरको पर्यटन गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
–	बलेवा–भैरवस्थान–भकुण्डे–पञ्चकोट पदमार्ग निर्माणको कामलाई तिव्रता दिइनेछ ।
–	निर्माणाधिन शालिग्राम संग्राहलयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
–	बागलुङ कालिका मन्दिर, पाग्जाकोट, मनकामना, पञ्चकोट, मालिका, भकुण्डे, वोडेईचौर, भैरवस्थान, शालिग्राम संग्राहलय, गौरीधाम, निरयघाट जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थालको बृहत्तर विकास गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्रका परम्परागत कोटहरुको प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
–	बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्ने योजना स्वीकृत भइसकेकाले नियमित हवाई उडानका लागि पहल गरिनेछ ।
–	संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा नगर क्षेत्रमा होमस्टे प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
–	नगरका पर्यटकीय स्थलहरुसम्म पुग्नका लागि पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिइनेछ ।
–	भकुण्डेमा रहेको बागलुङ संग्राहलयलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्रमा रहेका बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
–	सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धिका लागि सरोकारवालासँग ‘सामुदायिक विद्यालयमा एक दिन’ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
–	नगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा विश्वविद्यालयको सहकार्यमा प्राविधिक क्याम्पस सञ्चालन गरिनेछ ।
–	सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुको बीचमा अनुभव आदान प्रदान गर्न साझेदारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
–	प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी अवधारणा लागू गरिनेछ ।
–	एक वडा एक नमुना विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
–	एक विद्यालय एक बगैचा कार्यक्रमका लागि हरित विद्यालयको अवधारणालाई साकार तुल्याइनेछ ।
–	सामुदायिक विद्यायका ‘शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिबृद्धि बागलुङ नगरको शैक्षिक समृद्धि’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–	शिक्षामा दीर्घकालिन सुधारका कार्यक्रमका लागि गुरुयोजना तयार गरी अगाडि बढिनेछ ।
–	प्रारम्भिक बालविकास कक्षा विद्यालयको आधार कक्षाको रुपमा लिई एक विद्यालय एक प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा अवधारणा लागू गरिनेछ ।
–	विद्यालय तहको शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि शिक्षक तालिम, अभिभावक शिक्षा, प्रभावकारी अनुगमनलाई गरिनेछ ।
–	बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने जङ्कफुड निषेध गरिनेछ ।
–	माध्यामिक तह (कक्षा १२) सम्मलाई दिवा कक्षा सञ्चालनका लागि कडाई गरिनेछ ।
–	नगरपालिका कार्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरी अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
–	आधारभुत तथा माध्यामिक तह स्तरीय प्रतिभा प्रदर्शनी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
–	बालमैत्री नगरपालिका स्थापना गरिनेछ ।
–	विद्यार्थीको श्रम, सीप र व्यवहारिक ज्ञान प्रवद्र्धन गर्न लघु कृषि सिकाई केन्द्रहरुको रुपमा विकास गरिनेछ ।
–	प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने गरिब, विपन्न, दलित तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुलाई ‘गोविन्द अधिकारी व्यवसायिक छात्रबृत्ति कोष’ मार्फत नियमित छात्रबृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
–	न्यून विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयलाई स्थगत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	विद्यालय गुणस्तर शिक्षा सुधार तथा नमूना विद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा प्राविधिक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइनेछ ।
–	परीक्षा प्रणाली र व्यवहारिक शिक्षाका लागि विद्यालयमा लघु कृषि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–	शिक्षक नियुक्ति निष्पक्ष पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइनेछ ।
–	प्राथमिक तहमा गणित तथा अंग्रेजी विषयबाट पढाईलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षा विद्यार्थी अनुपातको आधारमा विद्यालयलाई स्थगन तथा समायोजन गरि सञ्चालन गरिएको छ ।
–	प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको नेतृत्व विकासमा सहयोग ।
–	आइ.सि.टी. र ल्याव व्यवस्थापनमा सहयोग गरिनेछ ।
–	विद्यालयहरुमा किशोरी छात्राहरुको लागि सेनेटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	सबै माध्यामिक विद्यालयहरुमा अनलाइन सफ्टवयर प्रणालीबाट तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
–	सबै विद्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिनेछ ।
–	धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस, पैयुपाटा बहुमुखी क्याम्पस, कृष्णगण्डकी क्याम्पसको सुधारमा पहल गरिनेछ ।
–	नगर स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठन गरिनेछ ।
–	अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुले अध्ययन गर्ने स्रोत कक्षालाई कार्यविधि बनाई नमूनाको रुपमा विकास गरिनेछ ।
८) शासकीय व्यवस्था एवं सुधार
–	नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि वेभसाइट, मोवाइल एप लगायतको प्रयोग गरिनेछ ।
–	नगरपालिका कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई पेपरलेस बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
–	नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको साँगठनिक चार्ट तयार गरिनेछ ।
–	नगरका वडाबाट प्रदान गरिने पञ्जीकरणका कामलाई अनलाइन सेवामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–	सबै वडामा वडा स्तरीय र नगरमा नगर स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन गरिनेछ ।
–	राजश्व चुहावट हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कर्डाका साथ न्यूनिकरण गरिनेछ ।
–	नगरको राजश्व बृद्धिका लागि कालिगण्डकी नदीको ढोडेनीदेखि म¥याङघाटसम्मको क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा नदीजन्य बस्तुको उत्खनन गरिनेछ ।
–	आर्थिक पारदर्शीता, जवाफदेहीता र भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता नीतिलाई अबलम्बन गरिनेछ ।
–	नमूनाको रुपमा २ नं वडाबाट डिजिटल नगर कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
–	नगरका उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–	कार्य क्षमता मूल्यांकनका आधारमा नगरका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ ।
–	नगरको हरेक वडामा एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	नगरको खानेपानीलाई स्वच्छ, सफा, पिउने योग्य बनाउन नगर खानेपानी संस्थासँग समन्वयात्मक ढङ्गगले अगाडि बढाइनेछ ।
–	विभिन्न समयमा सञ्चालित आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पहल गरिनेछ ।
–	खानेपानीको मुहानको संरक्षण तथा प्रवद्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–	बजार क्षेत्रको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न काठेखोलाको पानी लिफ्टिङ प्रणालीमा आधारित केन्द्रीय योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ ।
–	खानेपानीको अभाव देखिएका नगरका विभिन्न ठाउँहरुमा लिफ्टिङ र ड्रिलिङ कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
–	नगरमा खानेपानीको समस्यालाई दिर्घकालिन ढंगले समाधान गर्न बागलुङ बजार क्षेत्र, रात्माटा, पाखाथर, तिनतले समेतलाई समेट्नेगरी काठेखोला र रमेटार, कुडुले, ओढारचौरलाई समेट्नेगरी कालिगण्डकीबाट लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजना र लहरेपिपल, लामाचौर, रोकापाला लगायतका क्षत्रमा दीर्घकालिन खानेपानी समस्याको समाधानको काम अगाडि बढाइने छ ।
–	बा.न.पा. ३, ७ र ९ मा स्वीकृत एक घर एक धारा निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्नेगरी कार्यआरम्भ गरिनेछ ।
–	सिंचाई सुविधा नपुगेका खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउँनेगरी कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
१०) कला संस्कृति
–	विरशाली पन्त कला, साहित्य, संस्कृति पुरस्कारको स्थापना गरिनेछ ।
–	बागलुङमा रहेका सबै भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन तथा संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
–	विभिन्न जात जातीका भेषभेषा, भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
११) सूचना तथा सञ्चार
–	नगर क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको साझेदारीमा ‘जनतासँग मेयर’ रेडियो÷टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–	नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थागत विकास र पत्रकारहरुको क्षमता विकासका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढिनेछ ।
–	बागलुङमा क्रियाशिल पत्रकारहरुका लागि ‘बागलुङ नगरपालिका पुरस्कार’ स्थापना गरी हरेक वर्ष पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
–	नियमानुसार प्रकाशित गर्नुपर्ने विज्ञापन, सूचना, बोलपत्रहरु स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशनको व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बोलपत्रलाई स्थानीय प्रतिनिधिबाटै प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
–	बागलुङ नगरका गतिविधिहरुलाई सार्वजनिक गर्नेगरी बागलुङ बजारको उपयुक्त स्थानमा डिस्प्ले बोर्ड राखिनेछ ।
१२) जलविद्युत र उर्जा
–	बागलुङ नगर क्षेत्रमा सौर्य उर्जा जडानको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–	लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको काठेखोला जलविद्युत आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
–	नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य निजी केवल प्रदायक कम्पनीहरुको सहकार्यमा बजारलाई अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सुरुवात गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि प्रयोग गरिएका जिर्ण काठका विस्थापित गरी फलामे पोलको प्रयोग गरिनेछ ।
१३) कानून तथा न्याय
– मेलमिलाप माध्यस्थकर्तालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
–	अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रलाई नियमित सञ्चालन गरिनेछ ।
–	विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढाउँन वडा स्तरमा तालिम प्रदान गरी मेलमिलाप केन्द्रहरु गठन गरिनेछ ।
–	संघ र प्रदेशको सहकार्यमा नगरक्षेत्रका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ ।
–	नगर क्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न घाटहरुलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
–	बागलुङ क्षेत्रमा हालसावी नापीको कार्य सुभारम्भ गरिनेछ ।
–	पूर्व नगरप्रमुख ऋषिराम शर्माको स्मृतिमा निर्माणाधिन स्मृतिद्वारलाई यसैवर्ष सम्पन्न गरिनेछ ।
–	अल्पसंख्यक समुदायको रुपमा रहेका मुस्लिम समुदायको कवरस्थान, मदरसा र मस्जिद निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
–	टोल विकास संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै पुनःगठन गरी सक्रिय तुल्याइनेछ ।
–	साझा हितका लागि छिमेकी गाउँपालिका, नगरपालिकासँग समझदारी, समन्वय स्थापित गरी सरोकारका मुद्दामा सहकार्य गरी अगाडि बढिनेछ ।
–	विदेशी एवं स्वदेशी नगरपालिकाहरुसँग भनिगी सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ ।
–	कालिगण्डकी नदीलाई दोहन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
–	छाडा पशुपंक्षीहरुको नियन्त्रणको निम्ति आवश्यक पहल गरिनेछ ।
–	नगरपालिकाले लगाउँदै आएको कर समायोजन गरिनेछ ।
–	आन्तरिक आयलाई बृद्धि गर्न विभिन्न स्रोतहरुको खोजी गर्ने, करको दायरा विस्तार गरिनेछ ।
अन्तमा श्रोत साधनको न्यूनता, साझा अधिकार सूचीमा रहेको कानुन निर्माणको अभाव, जिम्मेवारी र योजना हस्तान्तरणको अभाव केन्द्र्रिकृत सोच र दृष्टिकोण, कर्मचारी समायोजन र विज्ञापनमा देखिएको अन्यौलका बाबजुद प्राप्त गरेका उपलब्धी दीर्घकालिन महत्वका छन् ।
बागलुङको समग्र विकासका निम्ति कोशेढुङ्गा सावित हुनेछन् । नगरको समग्र विकासका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सदस्य, प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं प्रदेशसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन, छिमेकी नगर, गाउँपालिकाका पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पु¥याउँनुभएको योगदानप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
मितिः २०७६/०३/०८ गते ।
राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा विभिन्न पदक पाउन सफल बागलुङका ८ खेलाडीलाई बुर्तिबाङमा सम्मान !